Dubious heroes demean shrine – Nehanda Radio
On May 22, 2017 5,697 8
Future Zimbabwean governments should exhume undeserving persons buried at the National Heroes Acre to pave way for the likes of Simpson Mutambanengwe who was denied the honour by Zanu PF, former ruling party spokesperson and liberation war icon Rugare Gumbo has said.
Zanu PF spokesperson Simon Khaya Moyo was not available for comment as his mobile phone was unreachable.
Mutambanengwe was buried at his rural home in Mutare on Saturday.
Gumbo, who is now an elder in the opposition Zimbabwe People First (ZPF) having been kicked out of Zanu PF in 2014 on charges of plotting to topple Mugabe, told the Daily News on Sunday that if he was to die under the current status quo, he feared he will also not be interred at the national shrine.
“A Zanu PF hero is partisan and a national hero is a man or woman who serves the country on non-partisan grounds, just like Joshua Nkomo and Josiah Tongogara,” he said. Daily News
Elias KanengoniheroesRugare GumboSimpson Mutambanengwe
‘Opposition to hold primaries to choose grand coalition leader’
Jun 22, 2018 49,048 0
Jun 22, 2018 110 0
Jun 22, 2018 18,981 0